BullyingCanada - siinta carruurta la xoogsheegtay mustaqbal ifaya
Wax Siinta Shirkadaha
Ugu deeq Gaari
Hadiyado Waaweyn & Securities
Ka Tagitaanka Dhaxal Xusuus Leh
siinta carruurta la xoogsheegtay
24/7/365 Shabakadda Taageerada
ayaa u taagan inuu caawiyo
Hel caawin Hada Hel Caawimo
Taageerada BullyingCanada Hel ka qayb Waad Caawin Kartaa BullyingCanada waxay ku tiirsan tahay deeqsinimada
taageerada shakhsiyaadka adiga oo kale ah.
mid ka mid ah xalka naxariista leh ee cagajuglaynta
Waxaan halkaan u joognaa inaan ku taageerno tallaabo kasta oo jidka ah.
BullyingCanada waa ururka kaliya ee qaran ee u xaliya xaaladaha cagajuglaynta ee dhalinyarada Kanadiyaanka ah isagoo si toos ah u fududeeya xidhiidhka ka dhexeeya caruurta la xoogsheegtay, kuwa jirdilaya, waalidiinta, macalimiinta, guddiyada dugsiga, adeegyada bulshada, iyo, marka loo baahdo, booliiska.
Hada Hel Caawimo
Si deeqsinimo leh
Nagu soo biir. Badbaadi nolosha
Taageeradayada muhiimka ah waxaa awooday tabaruceyaal iyo deeq-bixiyeyaal adiga oo kale ah.
Tobanaan kun oo dhallinyaro ah oo dalka oo dhan ah ayaa ku tiirsan BullyingCanada si looga caawiyo inay dib u helaan badbaadada cagajuglaynta ku dhawaad ​​bulsho kasta.
24/7 shabakada taageerada qaranka ee dhalinyarada la xoogsheegtay.
Aqoon-is-weydaarsiyada bulshadu waxay abuuraan maskax furan waxayna ilaaliyaan carruurta.
Barnaamijka deeqda waxbarasho
Deeq-waxbarasho ayaa awood u siinaya dhalinyarada inay noqdaan hogaamiyayaasha bulshada.
U doodista si hagar la'aan ah dhibanayaasha cagajuglaynta dhalinyarada.
Daqiiqad kasta waa la xisaabiyaa
naga caawi in aan ka jawaabno wicitaanada murugada leh ee caawimaadda
oohinta caawinaad 2020 talefoon iyo qoraal
oohinta caawimo 2020 iyada oo loo marayo sheeko toos ah iyo iimaylka
booqdayaasha BullyingCanada.ca sanadka 2020
Maalin kasta waxaan helnaa in ka badan kun oohin oo gargaar ah. Caawimadaada deeqsinimada leh ayaa muhiim u ah haqabtirka baahiyaha dhalinyarada qarankeena ee la xoogsheegtay.
Rob Benn-Frenette, ONB , Wada-aasaasaha
Ilmo laguma qasbi karo inuu ka tago dugsiga sababtoo ah ammaan maaha iyaga - taasi waa mid ka mid ah sababaha badan ee aan u aasaasnay BullyingCanada.
Katie Thompson (Neu) , Wada-aasaasaha
Sii carruurta la xoogsheegtay mustaqbal ifaya.
Ku biir BullyingCanada sidii loo heli lahaa kheyraad naf-badbaadin ah oo nafo lagu badbaadinayo, laguna caawinayo dhallinyarada dalka ugu nugul. Waxaa jira doorashooyin badan oo aad kaga qaybqaadan karto - laga bilaabo noqoshada mid ka mid ah deeq-bixiyeyaasha deeqsinimada leh ilaa u tabarucidda khadka taageerada ama caawinta xafiiska dambe. Maanta nala soo xidhiidh si aad wax badan uga ogaato
Noqo A Lifeline
Dhammaanteen waxan ku wada jirnaa – kumannaan dhallinyaro ah ayaa nagu tiirsan.
Fadlan hadda wax ku tabaruc, sababtoo ah daqiiqad kasta ayaa xisaabtamaysa!
Mar kasta oo ilmaha loo cagajugleeyo, waxay u badan tahay inay ku dhacaan nabarro jireed, shucuureed iyo maskaxeed oo socon kara inta uu nool yahay. Cagajuglayntu waxay burburin kartaa kalsoonida, waxay carruurta kaga tagtaa kalsooni la'aan, calool xanuun, weeraro argagax leh, iyo riyooyin qarow. Ma awoodaan inay xoogga saaraan dugsiga, taasoo keentay buundooyin liita oo laga yaabo inay yareeyaan fursadaha mustaqbalka. Marka cagajuglaynta aan loo dulqaadan karin, niyad-jabka iyo walbahaarka waxay u horseedi karaan carruurta inay naftooda dilaan.
Waxay u baahan tahay geesinimo weyn carruurta inay nala soo xiriiraan si aan u caawinno. Hadiyadaadu waxay xaqiijin doontaa in oohin kasta oo murugaysan oo gargaar ah laga jawaabay, maalin kasta… wakhti kasta. Ku-deeqiddaada waxay naga caawisaa inaan ku dhegganno carruurta ilaa iyo inta ay nagu qaadanayso inaan joojino cagajuglaynta oo aan siinno mustaqbal ifaya!
Maxaa si fiican u qeexaya weydiintaada? (*)Waxaan ahay dhalinyaro waxaanan u baahanahay in lagaa caawiyo la tacaalida cagajuglaynta.Waxaan u baahanahay in lagaa caawiyo deeq ama rasiidh cashuureed.Waxaan jeclaan lahaa inaan qof kala hadlo wax ku saabsan bixinta dhaxalka ama qorsheynta guryaha.Waxaan jeclaan lahaa in aan tabaruc u sameeyo BullyingCanada.Waxaan qabaa su'aal guud ama faallo.Waxaan ahay xubin ka mid ah warbaahinta waxaanan rabaa in aan la xiriiro.Mar dambe ma doonayo inaan ku jiro liiskaaga boostada.
Hel Caawin Hadda—Kaligaa Ma Tihid
24/7/365 taageero telefoon, qoraal, sheekeysi, ama iimayl
Ma laguu caga jugleeyay?
Ma ku kalsoonaan karnaa taageeradaada?
Lasoco wixii ku soo kordha BullyingCanada
(877) 352-4497 Taleefanka
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Shuruudaha Isticmaalka | Qalabka Warbaahinta & Tilmaamaha Calaamadaha
Xuquuqda 2006-2022. BullyingCanada, Inc. Dhammaan xuquuqaha way xifdiyeen. | Lambarka Diiwaangelinta Sadaqada: 82991 7897 RR0001.
Ogeysiis Muhiim ah oo ku saabsan Faafida COVID-19 ee socota
Sababtoo ah welwelka caafimaadka adduunka ee hadda jira iyo kheyraadka xaddidan, BullyingCanada waxay ku shaqayn doontaa si hoose oo leh adeegyo daruuri ah oo keliya. Tani waxay ka dhigan tahay in adeegyadayada (emailka, wada sheekaysiga tooska ah, taageerada qoraalka ah, iyo khadadka telefoonka) ay si toos ah u heli doonaan oo kaliya dhalinyarada inta uu jiro aafo. Dhammaan shakhsiyaadka kale waxa la gelin doonaa safka dabagalka waqti dambe.